Fikambanana FIMA “Tsy azo atao intsony ny mangina!”
Nisy ny faran’ny herinandro teo ny fivoriana notontosain’ireo herivelona maromaro tapa-kevitra ny hanohitra ny fiaraha-mitantana ireo nosy manodidina an’i Madagasikara izay natao tetsy amin’ny biraon’ny AKFM etsy Andravoahangy.
Anisan’ny tazana teny ny antoko politika maro toy ny Natiora sy Otrikafo. Teo koa ireo fikambanana mivoy izany toy ny FIMA sy ny Nosy Malagasy. Araka ny fanazavan’ny filoha nasionalin’ny fikambanana Madagasikara afaka na FIMA, Jhonny Paul Andrianjakatiana, moa dia efa nametraka ny 30 jona 2018, herinandro tao aorian’ny namoahan’ny praiminisitra, Ntsay Christian, ny datim-pifidianana tamin’izany fotoana izany fa ho atao ny 7 novambra ny fiodinana voalohan’ny fifidianana filoham-pirenena dia ny 12 desambra ny fiodinana faharoa. Nilaza izahay tamin’izay fa tsy vahaolana ny firosoana amin’ny fifidianana fa mila jerena aloha ny sosialim-bahoaka. Fiantraikan’ny fanapahan-kevitra tamin’izany izao mitranga eto amin’ny firenena izao, hoy izy. Olom-bitsy no nifidy ary hosoka no nahalany izao fitondrana izao. Tsy azo atao intsony ny mangina fa miantso ny herivelona rehetra hanambatra ny hery. Tsy ho amin’ny fanoherana ny fiaraha-mitantana ireo nosy manodidina ihany fa manoloana ny zava-mitranga rehetra mihitsy, hoy hatrany ny tenany.